हातखुट्टा बाँधेर नदीमा पसेका जादुगर बेपत्ता – Naya Pusta
हातखुट्टा बाँधेर नदीमा पसेका जादुगर बेपत्ता
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ असार २, सोमबार १६:२७ [post-views]
भारत । भारतका एक प्रख्यात जादुगर हातखुट्टा बाँधेर जादु देखाउन नदीमा छिरेपछि बेपत्ता भएका छन्। उनको मृत्यु भएको आशङ्का गरिएको छ।
पश्चिम बङ्गालको कोलकातास्थित हूग्ली नदीमा छिरेका चञ्चल लाहिरी सुरक्षित रूपमा बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उनी पानीभित्रै हराए। मानिसहरू उनी पानीमा छिरेको हेर्न जम्मा भएका थिए। तर पछि ती जादुगर बाहिर ननिस्किएपछि उनीहरूले प्रहरीलाई खबर गरे। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
छवटा ताला लगाइएको साङ्लोले उनको खुट्टा बाँधिएको थियो। उनलाई एउटा डुङ्गाबाट पानीमा ओरालिएको थियो। नदीमा दुईवटा डुङ्गामा बसेर तथा माथि पुल र नदी किनारमा भेला भएर मानिसहरूले त्यो रमिता हेरेका थिए।
प्रहरी र गोताखोरहरूले नदीमा आइतवार साँझ खोजी गरेका थिए। तर लाहिरी भेटिएनन्। एक अधिकारीले हिन्दूस्तान टाइम्स पत्रिकालाई बताएअनुसार शव नभेटिएसम्म उनलाई मृत घोषणा गर्न सकिँदैन।
किन गरे जोखिमपूर्ण जादु ?
एउटा स्थानीय पत्रिकाका लागि फोटो खिच्ने जयन्त पनि लाहिरीको जादु हेर्न गएका थिए। जादुको काम सुरु हुनुभन्दा अगाडि आफूले लाहिरीसँग कुरा गरेको उनले बताए। उनी भन्छन्, मैले किन ज्यान जोखिममा पारेर जादु देखाउन लागेको भनेर सोधेको थिएँ। उनी हाँसे र भने, मैले राम्ररी गरे भनेँ यो जादु हुन्छ। मैले गल्ती गरेँ भने यो दुस्खान्त हुन्छ।
ती जादुगरले मानिसहरूमा जादुप्रति रुचि जगाउन त्यसो गर्न खोजेको शलाई बताएका थिए। पानीभित्र जोखिमपूर्ण जादु देखाउने यो उनको पहिलो प्रयास भने थिएन। बीस वर्षअघि एउटा सिसाको बाकसमा राखेर उनलाई पानीभित्र छोडिएको थियो। त्यतिबेला उनी सकुशल बाहिर आएका थिए। शले त्यो जादु पनि हेरेका थिए।
उनी यसपालि पानीबाहिर आउँदैनन् भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ, उनले भने।बीबीसीको सहयोगमा
काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर किन यति गर्मी ?
पुट्ट बढेको पेट घटाउन अप्नाउनुहोस् यी १० घरेलु उपाय
राति नङ काट्नु शुभ कि अशुभ ?
बानेश्वरमा भव्य विवाह पार्टी, न दुलाहा आए, न जन्ती
आज श्रीपञ्चमी पर्व, विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाईँदै
शारिरीक सम्बन्धबाट नै निको हुने यी रोग !
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बैशाख १८ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय
लकडाउन डायरी !
खाडी र मलेसियामा रहेका २९ जना नेपाली कोरोना संक्रमित
कर्कट राशिका लागि यस्तो छ २०७७ साल, हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल
यी ८ राशिका लागी अति शुभ छ आजको दिन, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
नयाँपुस्ता फ्लोअपः कुटपिटको घटनामा चापाकोट मेयरको सक्रियता, आफैले मिलाए घटना
कोरोनाबाट मृत्यु भएमा १५ लाख दिने निर्णय
कोरोना नियन्त्रणमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको सक्रियता, कोरोनाबारे जानकारी दिने एपको निर्माण
देशका १० स्थानमा कोरोना परीक्षण सुरु, ९,१६८ जना क्वारेन्टाइनमा
नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नर बने महाप्रसाद अधिकारी